जँड्याहा (व्यङ्ग्य निबन्ध) | चितवन पोष्ट
जँड्याहा (व्यङ्ग्य निबन्ध)
जँड्याहा दुई किसिमका हुन्छन्– एकथरी हुन्छन्, सधैँ रक्सी पिएर जँड्याहा नामकरण गर्ने र अर्कोथरी भनेको कहिलेकाहीँ रक्सी पिएर जँड्याहा नामकरण गर्ने ।
“मलाई जँड्याहाहरु एकदम मन पर्छ, किनकि जँडियासँग बस्यो भने सितन त खान पाइन्छ’– भाइले यो कुरो गरेको सुनेपछि म एकछिन मूच्र्छा परेर हाँस्छु । उसले कुरो ठीकै भनेको हो कि झैँ पनि लाग्यो । साँच्चै जँड्याहासँग बस्यो भने जँड्याहाले भन्दा बढी त उसको छेउमा बस्नेले पो सितन खान पाउँछ नि है !
‘संसार कहाँ पुगिसक्यो’– मैले हिजो साथीभाइ भेला पारेर यही गफ चुट्दै थिएँ, एउटाले फ्याट्ट उठेर भन्यो, ‘त्यही त, तैँले झूट कुरो गर्न थालिस्, म नेपालमा जन्मिएर पच्चीस वर्षको भएँ, खै नेपाल देश छोडेर अन्त देश पुग्न सक्या छैन, संसार जहाँको उहीँ छ, पृथ्वी घुम्दैन, हामी जहाँको उहीँ छौँ, गफ नदे, निकै संसार कहाँ पुगिसक्यो रे ! लु त, चन्द्रमासम्म पुग्ने भ¥याङ बनाएर देखा हि…हि…हि… ।’ साथीको लगातारको बोलाइले सबै गलल हाँसे । एकछिनपछि यस्सो सोचेँ, उसले त मस्त रक्सी पिएर आएको रै’छ, केटो त जँडिया पो रहेछ, त्यसैले बोलेको बोल्यै गरेको रै’छ ।
तपाईंलाई थाहा छ, जँडियाहरुले कहिल्यै हार मान्दैनन्, भन्नाले उनीहरुले कुनै विचार राखे भने त्यो विचार गलत छ भनेर हामीले जतिसुकै तर्क गरेता पनि उसलाई जित्न अथवा तैँले भनेको गलत छ भनेर बुझाउन सकिँदैन । त्यसैले, सकभर जँडियासँग तर्क गर्न कोही मान्दैनन् ।
एकपटक एउटा जँडिया मस्तसँग रक्सी पिएर हल्लिँदै मेरो घरको छेउमा रहेको चौतारीमा आएर बस्छ । म उसको नजिक गएर नाम सोध्छु, घर सोध्छु । उसले सबै बताउँछ । मेरो गाउँभन्दा माथिल्लो गाउँको बासिन्दा रहेछ, काम परेर यता आएको, त्यही मौकामा मजाले रक्सी धोकेछ । ‘दाजु, तपाईंले कपडा उल्टो लगाउनुभएको छ, सुल्टो बनाएर लगाउनुहोस्’ मात्र के भनेको थिएँ मैले, उसले ठूलो ठूलो आँखा बनाउँदै मलाई गाली गर्न थाल्यो– ‘मेरो सुल्टो कपडा लगाएकोलाई तैँले उल्टो लगाएको भन्छस्, मलाई सिकाउँछस् तैँले ? सुल्टो र उल्टो मैले चिन्दिनँ र ?’ मैले उसले एकहोरो कराएको सुनिरहेँ, एकछिनपछि फेरि ‘हैन दाजु, साँच्चै तपाईंको लुगा उल्टो नै छ’ भनेँ । त्यसपछि जँडिया दाजु जुरूक्क उठ्दै हात माथि माथि उचाल्दै झन् चर्को चर्को स्वरले कराउन थाले । जँडियासँग सत्यको कुरो गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नुजस्तै हो झैँ लाग्यो । ‘जँडिया दाइ, तपाईंको जय होस्, उल्टै लगाएर बस्नू’ भन्दै म आफ्नो बाटो लागेँ ।
जँडियाको पारा नै बेग्लै हुने, संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे मै हुँ भन्ने सोचाइमा पुगिहाल्ने, भलै शरीर पूरै हड्डी मात्र किन नहोस् ! कयौँ रक्सी नपाउँदा भगवान्जस्तै हुने, रक्सी पिएर जँडियाको रुप धारण गरेपछि राक्षसको व्यहोरा देखाउन थालिहाल्ने पनि हुन्छन् । अचम्म त यो छ कि जँडियाले कोहीसँग नडराई कुरा गर्न सक्छ । रक्सीमा त्यस्तो के पावर हुनेरहेछ कुन्नि, मनभित्र उब्जिएका सबै कुरा छताछुल्ल पार्न सक्छ । केही वर्षअगाडिको घटना मलाई एकदम याद आइरहन्छ । हामी तीन–चार जना अति मिल्ने साथीमध्ये एउटाले सँगसँगै पढ्ने केटीलाई खुब धेरै मन पराउने रै’छ । सुरूसुरूमा त उसले भनेन, पछिपछि हामीले थाहा पायौँ । मन पराएको कुरो उसले उक्त केटीलाई भन्न नै नसक्ने, सधैँ डराउने । केटीको अगाडि गयो कि थरथर काम्दै भागिहाल्ने । हामीमध्ये एउटा साथीको बड्डे परेको थियो, आज पार्टी दे भनेर सबैले जबर्जस्ती गरेपछि उसले आफ्नो कोठामा रातिको पार्टीको बन्दबस्त ग¥यो । उही त हो रक्सी । सबैले टन्न पिएर जँडिया बनियो । एकछिनपछि त आफूले मन पराएकी केटीलाई हाम्रो साथीले फोन गरेर लभ यू सब्यो, के के हो के के भनेछ, तिमीबिना बाँच्न सक्दिनँ भन्नेजस्ता कुरा दस–पन्ध्र मिनेटसम्म बोलेको बोल्यै । उताबाट केटी रिसाएर गाली गरेकी छे, अहँ पटक्कै ध्यान नै नदिने । पछि केटीले हैरान भएर फोन अफ गरिदिइछे । केटो झोक्किँदै जाऊँ हिँड केटाहरु उसको घर भन्दै रातिको बाह्र बजे बाहिर निस्किन खोज्छ । हामीले बल्लबल्ल उसलाई थमाइदियौँ । भोलिपल्ट लाजले केटो कलेज नै गएन । दुई–चार दिन त्यो केटीको अगाडि नै परेन ।
प्रायः जँडियाहरु सत्य बोल्छन्, कहिलेकाहीँ लाग्छ– अदालतमा पनि अपराधीलाई रक्सी पिलाउनुपर्छ, अनि उसले सत्य÷असत्य उकालिहाल्छ नि ! तपाईंलाई थाहा छ– धनी, गरिब, नामी, इज्जतदार सबैलाई रक्सीले एउटै स्थानमा ल्याइदिन्छ, एउटै नाम दिन्छ जँडिया । कस्तो कस्तो अचम्म हुन्छ, जँडियाले खुल्ला आकाशलाई छानो बनाएर सडकमा नै सुतिदिन्छ । कट्टु, पेन्ट जे लगाएको छ त्यसैमा मुतिदिन्छ । जँडियाहरुले गफचाहिँ दह्रो दिन्छन्, घरमा खाने अन्न होस् या नहोस् तर जब रक्सी लागेर जँडियाको रुप धारण गर्छन्, तब हजारको होइन लाख र करोड़को कुरा गर्न थाल्छन् ।
एकपटक चिया पिउन प¥यो भनेर एक होटलमा पसेको थिएँ । त्यहाँ तीन–चार जना केटाहरु मस्त रक्सी पिएर जँडिया बन्दै थिए । चर्को चर्को कुरो गरिरहेका थिए । एउटाले टन्न खा, पैसा म तिर्छु अनि अर्कोले मलाई चाहिँ गरिब सोचेको, लखपतिको मालिक हुँ म भन्दै टेबलमा हात बजार्दै थियो । लाखौँ, करोडौँको कुराले ठूलो माहोल कब्जा गरेको थियो त्यहाँ । जब तिनीहरुले त्यहाँबाट घर जाने बेला भयो, हल्लिँदै हल्लिँदै साहूजीको नजिक आएर मुख बटार्दै बटार्दै ‘ओ साहूजी, हाम्रो कति भयो ? सबै खातामा लेख्नू, भोलि तिरौँला’ भन्दै बाहिर कुदे, म भने मूच्र्छा परेर हाँसे । साहूजीलाई चियाको पैसा तिर्ने बेला सोधेँ, ‘साहूजी, लाखौँ करोडौँको कुरो गरेका थिए, फेरि जाने बेला खातामा चढाउनू भन्दै गए त, के हो र ! साहूजीले आँखा ठूलो पार्दै भने– कहाँ धनी हुनु, यहाँ रक्सी धोकेको पैसा नै नतिरेको महिनौँ भइसक्यो, जँडियाहरु धनको कुरो त गर्ने नै भए नि । साहूजीको कुरोले अनि ती जँडियाको कुरोले मलाई मुसुमुसु हँसाउदै थियो । पैसा तिरेर फुत्त बाहिर निस्किएँ म ।
जँड्याहाहरु निउँ खोज्न निकै अगाडि हुन्छन् । जँड्याहा त्यसैत्यसै झर्किने, कराउने अझ भएन भनेर हातपात गर्नसमेत पछि पर्दैनन् । अरु बेला डरले घरभित्र लुक्ने पनि, जब जँड्याहाको रुप धारण गर्छन् तब सिँहजस्तै गर्जिन्छन् । घरमा पत्नी, छोराछोरीलाई पिट्नसमेत पछि पर्दैनन् । गाउँ नै पूरै थर्किने गरी चिच्याउँदै कराउँछन् । लाज र शरम भन्ने केही हुँदैन । जब जँड्याहाको रुप धारण सकिन्छ, भोलिपल्ट बल्ल पछुताउँछन् । ओहो ! मैले हिजो यस्तो गरेँ, उस्तो गरेँ, थुक्क म ! भनेर लाजले घरबाट बाहिर नै निस्किँदैनन् ।
एउटा अचम्मको कुरो के भने जुनसुकै जँड्याहाले पनि आफ्नो घरचाहिँ कहिल्यै भुल्दैन । जतिसुकै जँड्याहाको रुप धारण गरेता पनि बाटो नबिर्सीकन घर पुगेको नै हुन्छ । धनीसँग साथमा सधैँ पैसा नहोला, तर प्रायःजसो जँड्याहासँग भने साथमा पैसा कहिल्यै टुट्दैन । सामान्य मान्छेको भन्दा जँड्याहाहरुको साथी एकदम धेरै हुन्छन्, छिटो साथी बनाउन खप्पिस हुन्छन् उनीहरु । कोही कोही जँड्याहा यति धेरै गफ गर्न माहिर हुन्छन् कि रेडियो नेपाललाई समेत पछाडि छोड्दिन्छन् । कहिल्यै नबोल्ने, कहिल्यै गफगाफ नगर्ने पनि जब जँड्याहा बन्छ तब गफ गर्न उसलाई कसैले भेट्न सक्दैन । तपाईं एक्लै बसेको बेला कोही आएर ठूलाठूला गफ दिन्छ भने सम्झिनू, त्यो जँड्याहा हो । त्यस्ता मान्छेबाट टाढा नै भाग्नुपर्छ, नत्र गफैगफले वाक्क लाग्ने बनाइदिन्छन् ।
एकपटक म भरतपुरदेखि काठमाडौँको यात्रा जहाजभित्र बसेर गर्दै थिएँ । मेरो सिटमा बस्ने एक मित्र जँड्याहा परेछन्, ह्वास्सै उनको मुख गन्हाउन थाल्यो ! जब जहाज उड्न थाल्यो, त्यसपछि उनले गफ दिन थालेका त काठमाडौँ नपुग्दासम्म रोक्किएन । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री सबै बन्न लागेको छु भन्नसमेत पछि परेनन् । बीस, पच्चीस मिनेटको यात्रा पनि मलाई घन्टौँको यात्राजस्तै लाग्यो । एयरपोर्टमा झरिसकेपछि मेरो छेउ आएर ‘भाइलाई म प्रधानमन्त्री बनेपछि मेरो पीएको पद दिन्छु, ढुक्क भएर घर जानू है’ रे ! म त्यहीँ खित्का छोडेर हाँसेँ एकछिन । जँडिया र आगो दुवै उस्तै हुन्, दुवैलाई जिस्काउनु भनेको आफैँलाई नोक्सान पु¥याउनुजस्तै हो । त्यसैले, सकभर दुवै चीजबाट टाढा नै रहनुपर्छ ।